Uguquko lweLogos | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Epreli 21, 2013 NgeCawa, ngo-Epreli 21, 2013 Douglas Karr
Abantu Inkampani yeLogo zibuze Ukuba ilogo ayinakuphelelwa lixesha? Hayi iilogo azizomfanekiso nje ongalibalekiyo okanye imbonakalo yohlobo abamele ngalo, zixhomekeke ikakhulu kulowo babonwa kuwo nakwitekhnoloji yokuzijonga. Uphawu lweemoto lushicilelwe, kwiwebhu, nakwimoto… kunjalo kufuneka yenzelwe ukuba bobabini bamele uphawu lophawu kwaye babonwe ngendlela encedisayo kubo bonke oosiyazi… kunye negrill yesithuthi sakho.
Kwiminyaka eyadlulayo, uyilo lwe logo lwaludibanisa indlela ilogo enokubonakala ngayo kumnyama nomhlophe okanye kumatshini wefeksi ... ezi ayizizo ezona zinto sizikhathaleleyo kule mihla. Izitayile zelogo Ukukhula ngokuhamba kwexesha ngokunjalo, kwaye kunokuba kubalulekile ukuqhubeka nokujonga njengegama elitsha. Kwixesha elizayo, ndiqinisekile ukuba ubukhulu obunemilinganiselo emithathu, umaleko, okanye iilogo zokuhamba ziya kubonakala ngakumbi njengoko izixhobo zethu zixhasa. Kukho iitoni logo izixhobo ngaphandle ukuze uqhubeke nendlela iilogo eziqhubeka ngayo.
Kutshanje sihlaziye ilogo yethu kwi DK New Media, ukusuka:
Le nguqulelo yayiyindibaniselwano ye-D kunye ne-K kumfanekiso owawufanele ukuba ubonakalise iliso elijonge kwikamva. Akukho mntu wayenayo loo nto, nangona kunjalo, kwaye amahlaya amaphiko kaBatman alandela. Umzobi wethu wemizobo, uNathan, wathwala uxanduva kwaye wavelisa uphawu olusibonisa kakuhle. Sithatha iindlela ezahlukeneyo, zesiko ukuqhuba iziphumo zabaxumi bethu ukuya phezulu. I-logo entsha:
Nazi ezinye iinguqulelo zeelogo ezithandwayo ezivela Inkampani yeLogo:
tags: logo yeapilelogo ye-bmwlogo ye-canonlogo ye-ibmlogo ye-kodaklogologo yeemercedeslogo yeemercedes-benzmicrosoft logoMicrosoft windows logoilogo yepepsilogo yegobolondoIVolkswagen logologo ye-vwIwindows logoXerox logo
I-5 Insights Idatha yeNtlalontle inokutyhila kwiShishini lakho
Epreli 22, 2013 ngo-10: 09 AM
Ndiyathanda amaphiko eBatman! Kodwa ndiyayithanda i-Star Wars X-Wing Fighters nayo. Ngaba le mibutho iyinyani? Mhlawumbi, mhlawumbi akunjalo. Ndicinga ukuba iigradients zinokongeza ubutyebi kwilogo, kodwa entsha yakho ixhomekeke kwigreyidi yokunxibelelana nemilo. Oko kuyakukufaka engxakini ngobukhulu obuncinci, kwaye ukuba / xa ufuna ingxelo emnyama nomhlophe.
Kwaye ngelixa ndivuma nomoya weli nqaku ngokubhekisele kwindalo yelogo yophawu, ndicinga ukuba kuyahlekisa ukuba ufake iPepsi. Abanye banokuphikisa ukuba uguquko lwelo phawu lukhuthazwe luloyiko-kukufumana umgca wokuphila. Ndicinga ukuba bayitshintshile amaxesha amaninzi iimvakalelo zokungazithembi kunye nokuzithemba. Ngelixa okhuphisana nabo ophambili uCoca-Cola exhomekeke kuhlobo lwayo ukutyhubela iminyaka. Utshintsho kuhlobo oluphambili luye ngobuqili ngokumangalisayo, kwaye inkcubeko ye-pop iyamkele njengesilayi saseMelika.
Inqaku lam lelokuba, ngelixa ilogo akufuneki ukuba iphelelwe lixesha, kuya kufuneka uzabalazele leyo ikhona. Ungasoloko utshintsha imiyalezo ejikeleze yona, kodwa abantu bayathuthuzela kwaye bathembele kwiimveliso ezizithembileyo, kwaye bahlekise ngabo bengekho. Ulwa njani nomgxeki? Yiba yinyani.
Epreli 23, 2013 ngo-4: 57 AM
I logo yeYMCA ayisiyiyo indaleko- nangona banokuyidinga. Zilogo nje zeYMCAs okanye izakhiwo ezahlukeneyo kwaye ngokokwazi kwam ukuba zonke zisasetyenziswa.